पत्नी र १७ वर्षकी छोरीलाई दुबईमा लुकाएको आरोपबारे सलमानले दिए यस्तो जवाफ::The Leader Of Nepal
पत्नी र १७ वर्षकी छोरीलाई दुबईमा लुकाएको आरोपबारे सलमानले दिए यस्तो जवाफ
सलमान खान पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको शिकार बनेका थिए । उनले पत्नी र १७ वर्षकी छोरीलाई दुबईमा लुकाएको हल्ला फैलिएको थियो । सलमानले भर्खरैमात्र आफ्ना भाई अरबाज खानको टक शो ‘पिन्च टु’ टुमा यस्तो आरोपबारे खुलेर जवाफ दिएका छन् ।
यस शोमा आउने अतिथीहरुले ट्रोलर्स र उनीहरुले गरेका टिप्पणीमाथि प्रतिक्रिया दिन्छन् । अरबाजले यस्तै एक ट्रोल कमेन्टबारे प्रश्न राखे । जहाँ लेखिएको थियो,‘कहाँ लुकेको छस्, डरपोक । भारतमा सबैलाई थाहा छ कि तँ दुबईमा आफ्नी श्रीमती नूर र १७ वर्षकी छोरीसँग बस्छन् । भारतका मानिसहरुलाई कहिलेसम्म मुर्ख बनाउँछस् ।’
सलमानले यस अफवाहलाई खारेज गर्दै भने,‘यो सबै बकवास हो । उनले कसका बारे टिप्पणी गरेका हुन् र कहाँ पोस्ट गरे भन्ने मलाई थाहा छैन । म उनलाई भन्न चाहन्छु, ‘भाई मेरी पत्नी छैनन् ।’ म ९ वर्षको उमेरदेखि भारतमा ग्यालेक्सी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएको छु । मैले यी व्यक्तिलाई जवाफ दिन गइरहेको छैन । म कहाँ बस्छु भनेर पुरै भारतलाई थाहा छ ।’
सोशल मिडिया सल्लाहकारका रुपमा कैटरिया कैफ वा दिशा पटानीमध्ये कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि शोमा उनलाई सोधिएको थियो । उनले कैटरिनाको नाम लिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा कैटरिनाले निकै समझदारीपूर्वक पोस्ट गर्ने गरेको बताए ।
अहिले के गर्दैछन् छोरोबाट छोरी परिवर्तन भएकी कमेडी किङ्ग सन्तोष पन्तकी छोरी ?
कपिल शर्माले आखिर के गरे त्यस्तो एकाएक भड्किईन सधै हासीरहने अर्चना ?
यसकारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गोबिन्दाको मजाक उडाए
यस्तो आदेश आएपछि चर्चित गायिका विष्णु माझीको माइतीघरमा पुग्यो प्रहरी !
अचानक बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको घरमा के भयो ? घरबाट यस्तो नराम्रो खबर आएपछी कामै छोडेर बेलायतवाट फर्किए
अदालतको यो फैसला हामी मान्दैनौ : माधव नेपाल
फेरि रोकिने भयो ‘सक्किगोनी’को प्रशारण !
आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ चैत्र १० गते सोमवार
ओली सरकारमा आउँन ठिक्क परेका ठाकुरलाइ दाहाल र देउवाले फकाएर यस्तो अफर दिएपछि…..
प्रचण्डलाई आइपर्यो अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संकट ! अब के होला ?
नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वको पहल गर्ने निर्णय गरेपछि ठाकुर असन्तुष्ट, सत्तासंघर्ष रोचक मोडमा
एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै, नेपाल पक्ष पनि सहभागी हुने